गुणराज लोहनीलाई तत्काल रिहा गर्न क्रान्तिकारी पत्रकार सङ्गठनको माग, विज्ञप्तिसहित — Sanchar Kendra
१काठमाडौंमै लाइभ आत्म ह’त्या गरिरहेका यी युवालाई प्रहरीले यसरी बचायो
२ललितपुरमा यस्तो अवस्थामा भेटिए कपनको ढलमा परेका १० वर्षीय उज्ज्वल
३नेपालका एक युवकलाई भारतमा मृ’त्युदण्डको सजाय, यस्तो छ कसुर, को हुन् उनि ?
४नेपालमा फेरी भूकम्पको शक्तिशाली धक्का, कहाँ हो केन्द्रविन्दु ?
५एमाले बैठकमा लफडा, ओली बारे रघुवीर महासेठले गरे यस्तो सनसनीपूर्ण खुलासा
६इजरायलमा ‘केयरगिभर’का लागि १ हजार ६ सय जना सिफारिस, कहिले उड्न पाउछन ?
७राष्ट्रपति सीले पठाएको चार्टर्ड जहाजमा ३ बर्षपछि चीन फर्किइन् सरविना, को हुन् उनी ?
८नेपालबाट कहिले बाहिरिदैछ मनसुन ? मौसमसम्बन्धि यस्तो आयो ताजा अपडेट
९अखिल क्रान्तिकारीको २२ औँ राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न, को-को भए नयाँ पदाधिकारी ?
१०भरतमोहनकी छोरी माधव नेपालको पार्टीमा
११थप ९५३ जनामा कोरोना संक्रमण, कति जनाको भयो मृत्यु ?
१२एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक- टोली नेताले दिए यस्ता सुझाव
गुणराज लोहनीलाई तत्काल रिहा गर्न क्रान्तिकारी पत्रकार सङ्गठनको माग, विज्ञप्तिसहित
काठमाडौं । क्रान्तिकारी पत्रकार सङ्गठन, नेपालले लेखक तथा राष्ट्रिय जागरण मञ्चका संयोजक गुणराज लोहनीलाई तत्काल रिहा गर्न माग गरेको छ । संगठनका अध्यक्ष डिल्लीराज रावत र महासचिव बाबुराम भुसालले एक विज्ञप्ति जारी गरेर पत्रकार तथा बरिष्ठ लेखक समेत रहेका लोहनीलाई विना कारण गिरफ्तार गरिएको बताएका छन् ।
स्वतन्त्र र राष्ट्र्प्रेमी अभियन्ताहरुलाई पक्राउ गर्ने शैलीको घोर भर्त्सर्ना गर्दै उक्त सङ्गठनले यसप्रकारको ज्यादती र गैरन्यायिक गिरफ्तारी बन्द नगरिए शशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ ।लोहनीलाई बिना कारण पक्राउ गर्नु र अनावश्यक दुख दिने नियतले पक्राउ गर्नु प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सोमबार बाटोमा हिडिरहेका बेला उनलाई अपहरण शैलीमा प्रहरीले गिरफ्तार गरेको पत्नी सरला रेग्मीले बताइन । लोहनीलाई सोमबार वेलुकीतिर चितवनबाट प्रहरीले गिरफ्तार गरको हो । रेग्मीका अनुसार बाटोमा हिडिरहको अवस्थामा प्रहरीले गिरफ्तार गरेको थियो । लोहनीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमै राखिएको छ ।
स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखिएपछि लोहनीले राजनीतिबाट बिदा लिएका थिए । हाल उनले राष्ट्रिय जागरण मंच गठन गरेका छन् । लोहनी यसपहिला विप्लव नेतृत्वको नेकपाका केन्द्रीय सदस्य थिए । यसअघि पनि गत असोजमा चितवन प्रहरीले गिरफ्तार गरेको थियो । त्यसबखत पनि उनी १३ दिन हिरासतमा बसेका थिए ।
काठमाडौंमै लाइभ आत्म ह’त्या गरिरहेका यी युवालाई प्रहरीले यसरी बचायो